Cast TV for Roku/Chromecast/Apple TV/Xbox/Smart TV 7.319 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 7.319 လြန္ခဲ့ေသာ3ပတ္က
Application မ်ား ဗြီဒီယို ပေလယာမ်ား & အယ္ဒီတာမ်ား Cast TV for Roku/Chromecast/Apple TV/Xbox/Smart TV
Cast TV for Roku/Chromecast/Apple TV/Xbox/Smart TV ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
Stream & Cast to TV by Castify for Android with over 5,000,000 users so far.
Cast & Stream movies, videos, or music from web browser to TV.
Also cast local movie, music, or photos found on your phone/tablet to TV with compatible streaming devices.
-This app only casts from websites that uses public format. Proprietary video & movie formats such as Prime Video, Direct TV, Netflix, etc...will NOT cast to TV.
-Most connection problems can be resolved by restarting the Chromecast, Roku, or other receivers or phone.
stream & ယခုအချိန်အထိ 5.000.000 ကျော်အသုံးပြုသူများနှင့် Android အတွက် Castify အားဖြင့်တီဗီ Cast သုံးရန်။
Chromecast ကို 1, 2, Ultra HD 4K
Apple ကတီဗီ Airplay (4th gen) tvOS 10.2+
Roku Express ကို, Roku လွှ Stick, ဒါမှမဟုတ် Roku TV ကို
ကို DLNA အသံဖမ်း
Xbox One မှာ, Xbox 360
Google Cast ကိုအသံဖမ်း
ကို DLNA နှင့်အတူစမတ်တီဗီ built-in အပါအဝင်: Panasonic, LG တီဗီ, TCL, Phillips က Sony က Bravia, Samsung Sharp က, နှင့်အခြားသော။ သင့် TV ရဲ့ user ကို manual စစ်ဆေးပါ။
- တီဗီ, ဗီဒီယို, ရုပ်ရှင်, ဂီတ, ဒါမှမဟုတ်ဓါတ်ပုံ Cast ကို
- ဝက်ဘ်ဆိုက်များကနေအွန်လိုင်းတွေ့ရှိခဲ့ Cast ကိုကို web ဗီဒီယိုများ
- Chromecast ကို, Roku, Xbox, Apple TV သို့မဟုတ်သဟဇာတပစ္စည်းများမှဖုန်းပေါ်မှာဒေသခံဖိုင်များမှ TV သို့စီးဆင်းစေ
- တစ်ကြိမ်တန်းစီအတွက်သာလျှင်2ကိုပစ္စည်းများ
- တစ်ကြိမ်သာလျှင် 1 bookmark
- သမိုင်း Play
- မည်သည့်ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာဗီဒီယိုများ၏ search
- က်ဘ်ဆိုက်နှုန်းကို Block သည် popups
* အခမဲ့ features တွေကြော်ငြာတွေ-supported ရှိပါတယ်။
- Roku အဝေးထိန်း
- Roku လိုင်းများ
- စာတန်းထိုးများ (ယခုအဘို့ကိုသာ Chromecast ကို)
- စိတ်တိုင်းကျ themes များ
- တန်းစီအတွက်ကျော်2ဗီဒီယိုများ
- ကျော် 1 bookmarks ကို
- သတ်မှတ်မည် home page ကို
- devices တွေကိုဖြတ်ပြီး Sync ကို
ဒီ app ကို Google Chromecast ကိုနှင့် Google Cast ကိုအသံဖမ်းနှင့်အတူအကောင်းဆုံးအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ အသုံးပြုသူများသည်အခြားသတ္တုများပုံသွန်းအသံဖမ်းနှင့်အတူကန့်သတ်လုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုတွေ့ကြုံခံစားနိုငျသညျ။
ဒီ app ကိုဝေမျှ / mirroring ဖုန်း screen ကိုမဟုတျပါဘူး။
တီဗီမှ web browser ကိုထံမှရုပ်ရှင်များ, ဗီဒီယိုများ, သို့မဟုတ်ဂီတသို့ကာစ် & Stream ။
ဒါ့အပြင်သဟဇာတ streaming များ devices များနှင့်အတူတီဗီရန်သင့်ဖုန်း / Tablet ကိုအပေါ်ကိုတွေ့ဒေသခံရုပ်ရှင်, ဂီတ, ဒါမှမဟုတ်ဓါတ်ပုံကိုသွန်းလေ၏။
1. website တစ်ခုမှသွားလာရန် app ကိုဖွင့် browser ကိုသုံးပါ။
2. အဆိုပါ browser ကိုမဆိုဖွင့ ်. ဗီဒီယို, ရုပ်ရှင်, ဒါမှမဟုတ် site ပေါ်တွင်ဂီတကိုရှာဖွေနိုင်ဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။
3. ထိုအခါဖုန်း / Tablet ကိုအပေါ်ပြည်တွင်းဖြစ်ကကစား, ဒါမှမဟုတ် Chromecast ကိုဒါမှမဟုတ်သဟဇာတ streaming များအသံဖမ်းတစ်ဦးနှင့်အတူတီဗီမှသွန်းလေ၏။
က MP3 ဂီတ
JPG, PNG ပုံရိပ်တွေ
တချို့က IPTV m3u8 url များ
4K နှင့် HD ကိုဘယ်မှာရှိနိုင်ပါ
တချို့ကလွှ receiver ၏အင်္ဂါရပ်များ & န့်သတ်ချက်များ
Roku လွှ devices များ & Roku တီဗီ:
- သာ Roku များအတွက်အဝေးမှထိန်းချုပ်
- အဘယ်သူမျှမကဗီဒီယိုကိစ္စတွေပြန် / ပွတ်တိုက်မရှိ audio streaming ၏, အချို့ဖိုင် Format မထောက်ပံ့ပါ။
Apple ကတီဗီ AirPlay:
- AirPlay setting တွင်ဖွင့်ထားရမည်ဖြစ်သည်
- ဘက်ထရီ Optimization, ထအသံများနှင့်ဓာတ်ပုံကိုမထောက်ပံ့၏ဒေသခံသွန်းကို Android 6.0 Marshmallow များအတွက်ပိတ်ထားခြင်းနှင့်ရမည်ဖြစ်သည်။ MKV ဖိုင်တွေမထောက်ပံ့ပါ။ တချို့က urls ကို formats မထောက်ပံ့ပါ။
Xbox One တွင် & Xbox 360:
- ကို DLNA setting တွင်ဖွင့်ထားရမည်ဖြစ်သည်
မီးတီဗီ: အချို့ video ရုပ်ရှင်ကို formats မထောက်ပံ့ပါ။
အောက်ပါ streaming များ devices များနှင့်စမတ်တီဗီဒီတော့သူတို့ကို Chromecast ကိုကဲ့သို့ကောင်းသောလုပ်ကိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားပါဘူးကျေးဇူးပြုပြီး BETA ထောက်ခံမှုအတွက်နေသောခေါင်းစဉ်: DLNA ကိရိယာများ, အန်းဒရွိုက်တီဗီ, Xbox One တွင် & Xbox 360, များတွင် We-OS, Netcast
တချို့ကစမတ်တီဗီ Google က Chromecast ကို app ကို (သို့မဟုတ်ကို DLNA) built-in ရှိသည်:
သငျသညျသူတို့အားမော်ဒယ်များမဆိုရှိပါကအဲဒါကိုတီဗီမှနှငျထုတျဖို့သဟဇာတင်လျှင်ကြည့်ရှုရန် streaming များအသံဖမ်း၏တဦးတည်းရှိလျှင်, စစ်ဆေးပါ။
Castify, modify ကို download လုပ်ပါ, ဒါမှမဟုတ်ဗီဒီယိုသတင်းရင်းမြစ် transcode မထားဘူး။ ကိုယ်ကသာသင့်ရဲ့ streaming များအသံဖမ်းမှမူလအရင်းအမြစ်ပေးပို့သည်။ ဒီ app မဟုတ်ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်ကိုမဆိုအကြောင်းအရာပါဘူး။ ထိုကြောင့်ဗီဒီယိုများ၏ Compatibility ကိုနှင့်ရရှိနိုင်မှုအရင်းအမြစ်ဝက်ဘ်ဆိုက်များသူတို့ကိုယ်သူတို့အပေါ်မှီခိုဖြစ်ကြသည်။
-This app ကိုသာအများပြည်သူ format ကိုအသုံးပြုတဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေကနေတတ်၏။ ထိုကဲ့သို့သောစသည်တို့ချုပ်ဗီဒီယို, တိုက်ရိုက်တီဗီ, Netflix, အဖြစ်စီးပွားဖြစ်ဗီဒီယိုအား & ရုပ်ရှင်ကို formats ... TV မှနှငျထုတျမပါလိမ့်မယ်။
ဗီဒီယိုတစ်ကားကိုကစားသည်မဟုတ်တစ်ခုသို့မဟုတ်အဆက်ဖြုတ်ဖြစ်ပေါ် -If, ကအတော်ကြာအကြောင်းပြချက်ဖြစ်နိုင်:
1. အဆိုပါ ISP က (Internet Service Provider)
3. မလုံလောက် WIFI signal ကိုခှနျအားဗလ
သင့်ရဲ့ WIFI ကွန်နက်ရှင်တည်ငြိမ်နှင့်အတူတူပင် network ပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ် -Ensure ။ တီဗီအွန်လိုင်းရုပ်ရှင်များ Streaming ကောင်းတစ်ဦးကိုအင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်လိုအပ်သည်။
- အများစုကကွန်နက်ရှင်ပြဿနာတွေမှာ Chromecast, Roku သို့မဟုတ်အခြားအသံဖမ်းသို့မဟုတ်ဖုန်းကိုပြန်လည်စတင်ခြင်းဖြင့်ဖြေရှင်းနိုင်ပါသည် ။
-Flash ရုပ်ရှင်ဝက်ဘ်ဆိုက်များစီး device ကိုထုတ်လုပ်သူများကထောက်ခံကြသည်မဟုတ်။
Cast TV for Roku/Chromecast/Apple TV/Xbox/Smart TV အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Cast TV for Roku/Chromecast/Apple TV/Xbox/Smart TV အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Cast TV for Roku/Chromecast/Apple TV/Xbox/Smart TV အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Cast TV for Roku/Chromecast/Apple TV/Xbox/Smart TV အား အခ်က္ျပပါ
hispapp စတိုး 97 27.9k
Cast TV for Roku/Chromecast/Apple TV/Xbox/Smart TV ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Cast TV for Roku/Chromecast/Apple TV/Xbox/Smart TV အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 7.319
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://castify.tv/privacy.htm
App Name: Cast TV for Roku/Chromecast/Apple TV/Xbox/Smart TV
Release date: 2019-07-29 20:44:26
လက်မှတ် SHA1: B4:6F:73:C3:38:CC:58:2A:17:9D:B8:F2:97:70:1C:28:28:E9:2F:86
Cast TV for Roku/Chromecast/Apple TV/Xbox/Smart TV APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ